Warbixin Muhiim ah oo ku saabsan Manchester Derby iyo hadaladii ay tababarayaasha ka yiraahdeen kulanka Caawa – Gool FM
Warbixin Muhiim ah oo ku saabsan Manchester Derby iyo hadaladii ay tababarayaasha ka yiraahdeen kulanka Caawa
Byare December 10, 2017
(Manchester) 10 Dis 2017. Man United ayaa caawa Old Trafford ku marti qaadeysa kooxda ay coltamaan ee Manchester City iyadoo hankeedu yahay inay xarfaanta Guardiola dha dhansiiyaan guul daradii ugu horreysay Premeri League kal ciyaareedkan.
Halka Man City ay eeganeyso sidii ay u gaari lahayd 14 kulan oo guul xiriir ah horyaalka si ay usoo bar bareeyaan Rikoodh muddo u yiilay Arsenal.
Haddaba waxaan halkan idin kugu heynaa xog Muhiim ah oo ku saabsan kulanka Caawa iyo waxay ay Jose Mourinho iyo Pep Guardiola ka yiraahdeen kulanka:
Yaa Guulo badan Man United vs Man City?
Kulanka caawa ayaa noqon donaa ciyaartii 175-aad ee Machester Derby.
174-tii kulan ay horey u ciyaareen, Man United ayaa adkaatay 72-kulan halka ay Man City adkaatay 50, waxayna bar baro galeen 52-kulan.
Labada koox ayaa 40-jeer ku kulmay Premier League, Man United ayaa adkaatay 20 halka City ay guuleysatay 12-kulan.
Kulamada heerka sare Man United ayaa dhalisay 59-gool halka City ay dhaliyeen 5-1 gool.
Yeelkeede, is aragii ugu dambeeyay ee labada kooxood ee Bishii Abriil ayaa ku idlaaday bar baro goolal la’aan ah.
Yaa guul badan Jose Mourinho vs Pep Guardiola?
Macallinka reer Portugal iyo midka reer Spain ayaa isaga hor yimid 19-kulan waxaana dagaalka ku xoog badan Guardiola.
Mourinho ayaa garaacay Pep 4-kulan oo qura halka isna la lagday 8-kulan waxayna bar baro galeen 7-kulan.
Maxay kulanka ka yiraahdeen Jose iyo Pep?
“Uma baahni inaan ogaado in kulanka Derby-ga uu wax gaar ah u yahay dadka.
“Innaga ahaan, wuxuu ugu dambeyn inoo yahay Saddex dhibcood uun, laakiin daacadii waxaan aaminsanahay in dadka ku dhashay magaalada Manchester ee dareemaya Midabada waa xifaaltan fiican iyo kulan gaar ah.
“Aniga ahaan, waa kulan kale oo wayn aan ku wajaheyno mid ka mid ah kooxaha ugu fiican dalka, waxaan nahay koox ka fiican sanadii hore. Waxaan aaminsahay in City ay iyana ka fiican tahay sidii sanadii hore.
“Inaad aado Old Trafford waa farxad, taasi waa sababta aan halkan u joogno, Hubaashii waan ku raaxeysan doonnaa.
“Waxaan si xiiso leh ku sugayaa inaan halkaa gaaro kuna ciyaaro, waan jeclahay inaan halkaa joogo anigoo ka shaqeynaya waxa aan sameyn karno si aan iyaga u garaacno.
“Kulanka kaddib waan isgacmo qaadi doonnaa.”.
Shaxda isku dhafka ah ee labada kooxood…(Waxaa ku badan hogaamiyayaasha Man City)
Philippe Coutinho oo go'aankiisa u gudbiyay madaxda Liverpool
TOOS u daawo: Chievo vs AS Roma - LIVE (Shaxda sugan)